मेलम्चीको काम 'फास्ट–ट्य्राकमा', कहिले देखि आउँछ काठमाडौंका धारमा मेलम्चीको पानी ? - सुनाखरी न्युज
मेलम्चीको काम ‘फास्ट–ट्य्राकमा’, कहिले देखि आउँछ काठमाडौंका धारमा मेलम्चीको पानी ?
Posted on: November 11, 2021 - 10:55 am
सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनालाई ‘फास्ट–ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा गेग्रानले पुरिएको आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङको मुखलाई पूर्वअवस्थामा ल्याउन फास्ट–ट्र्याकबाट टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर अस्थायी रूपमा पानी ल्याइने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मेलम्चीको शिर भेमाथाङबाट बगेको पहिरोले हेडवर्क्सको सबैजसो भाग पुरिएको छ भने प्रवेश मार्गको करिब ६ किमि भागमा क्षति पुगेको छ । गत फागुनमा परीक्षणका क्रममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण गरिएको थियो तर बाढी आएकै दिन बिहान सुरुङमा पठाइएको पानी बन्द गरिएको थियो । काठमाडौंमा पानी वितरणको परीक्षण गरिसकेको आयोजना बाढीपहिरोपछिअनिश्चित बनेको छ ।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले फास्ट–ट्र्याक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले फास्ट–ट्र्याकबाट टेन्डर प्रक्रियाका लागि नीतिगत निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङ सफा गरेर काठमाडौंमा पानी ल्याउन बढीमा तीन महिना लाग्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ । हेडवर्क्सको संरचना करिब २० देखि ३० फिट बाक्लो गेग्रानले पुरिएको छ । डाइभर्सन र अडिट टनेल कति पुरिएको छ भन्ने यकिन भएको छैन ।
मेलम्चीको भौतिक संरचना निर्माण सुरु गरेको २२ वर्षमा गत फागुनमा पानी काठमाडौं ल्याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गरिएको थियो । हेडवर्क्स निर्माण पूरा नभई उद्घाटन गरिएको थियो । बाढी आएकै दिन सुरुङको मुख बन्द गरेकाले लेदो र गेग्रान सुरुङमा पस्न नपाएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । काठमाडौंको सुन्दरीजलदेखि मुहान क्षेत्र हेलम्बुसम्मको २६ किमि सुरुङलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । सुरुङको लम्बाइ सुन्दरीजल–सिन्धु ९ दशमलव ४, सिन्धु–ग्याल्थुम ८ दशमलव २ र ग्याल्थुम–अम्बाथान ८ दशमलव २ किमि छ ।